6 Ka Mid Ah Wakhtiyada Layaabka Leh Ee Indhahaaga Ka Dhigi Kara - Kale
Japan waa wadan la yaab leh hadaad ka timaado meel sida UK, US, ama meelo kale oo adduunka ah. Iyagoo u arkaya inay wax qabanayaan aad si ka duwan xagga madadaalada.
Laakiin haddana mar labaad - waxaan la yaab ku noqon karnaa Jabaan, innagoo u aragna inaan sidoo kale ka duwan nahay
Waxaan sidaa u leeyahay si tan loo dhaho: qaar ka mid ah riwaayadaha animeed ayaa 'yaab leh' u qaadaya heer cusub oo madadaalo ah. Qaar ka mid ah kuwaas oo kaa dhigi doona indhahaaga rogrogmada, kaa dhigaya inaad iska tuurto ama jooji daawashada oo dhan wada.
Iyada oo la adeegsanayo fikrado qariib ah oo kaa weydiin doona cidda ama sababta xitaa loo sameeyay.
Waa kuwan 6 ee anime yaabka leh ee laga yaabo inay kaa dhigto inaad laba jeer ka fikirto.
1. Walaashey Yar Ayaa Kaliya Waxaad U Baahan Tahay
Walaasha Yar Ayaa Kaliya Waxaad U Baahan Tahay la sii daayay 2017. Waxaa sameeyay isla istuudiyaha yaa abuuray Isku xidhka Kokoro.
Markuu qeybta koowaad furmo, ma ogid waa maxay in laga fakaro. Isaga oo u arkaya waxa la sawiray inay yihiin qaraabo.
sanduuqa megalo, xerada yuru, asobi asobase, ayaa kuubaxaysa
Oo inta anime si ula kac ah kuu tuurayso 60-ka ilbiriqsi ee ugu horreeya, inta kale ee anime-ka ayaa si aad ah hoos ugu soo dhacaya. In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo yaab leh oo soo socda oo kaa dhigaya mid aan raaxo lahayn.
2. Masterka Waqtiga Dilka
Cunug la yiraahdo Seki-kun waxaa loo arkaa nacasnimo ku dhex jirta fasalka iyo waqtiga dilka. Dhacdo ilaa dhacdo.
Qayb kasta waa 7 daqiiqo, laakiin waxa ku soo kordha iyo qaab lafteeda waa yaab.
Sida qaadashada farabadan tirtireyaasha iyo sameynta qaabab iyaga ka mid ah (sawirka kore).
Ama waxyaalaha kor u sarraysiinaya sida domino-ga.
Kani waa macno ahaan diiradda bandhigga, markaa ha ka filin sheeko badan ama khadad caqli-gal ah oo ku jira tan.
3. Golaha Ardayda ugufiican
Kani waa iskuul / gogo 'taxane nolosha ah. Haddana - in kasta oo aanad lahayn sumad 'ka sarraysa', Rino Rando wuxuu leeyahay boombalo hadlaya oo nool. Oo wuxuu noolaa tobannaan sano.
Marnaba lama sharraxin sida ama sababta ay u awoodo inay hadasho (xitaa iyada oo aan iyada hayn) laakiin waa wax yar oo la yaab leh.
In kasta oo ay taasi jirto, kani waa anime-ga kaliya ee aan u arko mid lagu raaxeysto oo mudan in la daawado, in kasta oo ay yaab leedahay.
La xiriira: Anime-ka 1-aad Waa inaad Daawataa Uguyaraan 'Mar Kasta' Noloshaada
4. Kani ma Zombie baa?
Ninkan waa ladilay , dib loogu soo nooleeyay, xaday dharka gabdhaha sixirka ah (iyo awoodaha), ka dibna ay ku qasabtay isla gabadhu inay la dagaallanto makhluuqaadka. Dharka sida gabar sixir ah…
Haddii taasi aysan u muuqan wax la yaab leh, markaa qof ayaa u baahan inuu ii sheego waxa uu yahay!
Funyily ku filan, tani waa isla sababta ay anime u leedahay 'rafcaan' qaar ka mid ah taageerayaasha. Laakiin waa wax aad iigu yar qosol aniga, waxaana laga yaabaa inay adiga kuu tahay.
5. Shaqaaliisha Shaqo
Anime wuxuu asal ahaan qaadanayaa dagaalkii adduunka 2 , oo ay dib uga qortay sheekadeeda dhacdooyinka.
MAGAALO… jilayaashu waa gabdho yar yar. Carruurta xitaa. Iyaga oo 'qaniinyadooda' la soo bandhigayo sida aad ka arki karto sawirka.
Xitaa waxaa lagu qiimeeyaa sida qaawanaanta khafiifka ah , taas oo dhaheysa dhamaanteed.
Marka la eego animesyada ku saleysan waaqica ama dhacdooyinka nolosha dhabta ah, waa kaftan maad ah. Iyo dariiq aad u layaab badan oo aan si dhab ah u qaato.
Waxaan ula jeedaa, maxay ku xiiso badan tahay daawashada gabdhaha yaryar ee nus-qaawan oo duulaya iyaga oo wata qoryo kala badh cabirka jidhkooda?
La xiriira: 2 Riwaayado Caan Ah Oo Aan Caadi Ahayn Oo Ku Salaysan Dhacdooyinka Nolosha Dhabta ah
6. Eey & Maqas
Asal ahaan wiil ayaa la dilaa, oo dib loogu soo nooleeyaa… EY ahaan. Ma heli kartaa wax kasta oo la yaab leh?
Qariibnimadu intaas kuma joogsato in kastoo. Naagta murugada leh (sawirka) waa qofka kaliya ee maqli kara fikirradiisa, in kasta oo loo rogay eey.
The animes kaftanka caajis , Aflagaado caajis ah, iyo inta badan oo dhan - fetishka yaabka leh ee ay gabadhu ku hayso jirdil, iyo xitaa xiisaha eyga… Waa wax aan caadi ahayn.
Waxay qaadataa sadism ilaa gees la yaab leh oo adduunka ah oo aan istaahilin in la arko.
Dhab ahaan - waa laga yaabaa inay tahay yaabka leh anime weligiis jira.
Waxaa iska cad inay anime u tahay qof kasta oo qaba fetish la yaab leh. Haddii kale wax fikrad ah kama haysto waxa ay abuureyaashu ku fakarayeen nooca 'majaajillada' ah ee ay isku dayeen inay ka baxaan.
Anime kale oo la yaab leh:
Waa Waxaad Guys Khaldan tahay Ma Caanbaa!
Oo ma waxaad moodeysay inaysan waligeed gabar ku jirin khadka tooska ah?
Haganai: Ma lihi saaxiibo badan.
Gabadhayda Koowaad Waa Gal.
Tijaabooyinka Seria Lain.
Akhriso Tan: 7 Riwaayadaha Anime oo saadaaliyay mustaqbalka oo ka horreeyay wakhtigooda
sidee u ekaadaa anime gacaliye